အပေါ်လက်လက်ဒစ်ဂျစ်တယ်သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာခြင်း၊ အကောင်းဆုံးလက်မောင်းသွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာခြင်း၊ တရုတ်ပြည်ရှိလက်နက်ကြီးများထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက်သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာခြင်း
အဓိကစျေးကွက်များ: Americas , East Europe , Europe , North Europe , West Europe , Africa , Asia , Middle East
 Homeထုတ်ကုန်များသွေးဖိအားမော်နီတာအထက်လက်ရုံးသွေးပေါင်ချိန် Monitor
အထက်လက်ရုံးသွေးပေါင်ချိန် Monitor (Total 44 Products)
အထက်လက်ရုံးသွေးပေါင်ချိန် Monitor ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, အပေါ်လက်လက်ဒစ်ဂျစ်တယ်သွေးဖိအားစောင့်ကြည့်, အကောင်းဆုံးလက်မောင်းသွေးဖိအားစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ကြီးမားသောလက်နက်များအတွက်သွေးဖိအားစောင့်ကြည့် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
CE က ISO အတည်ပြု Aneroid သွေးဖိအားမီတာ
Digital Cuff အလိုအလျှောက်သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာခြင်း
BP ယန္တရားသွေးဖိအားမော်နီတာများအတွက် Air Valve
အလိုအလျောက်ဆရာဝန် OEM LCD သွေးဖိအားစောင့်ကြည့်
Ambulatory ဒစ်ဂျစ်တယ်အထက်လက်ရုံးသွေးဖိအား Monitor
FDA ကအတည်ပြုထားတဲ့ Bluetooth Heart Rate Blood Pressure Monitor
ရပ်တန့် Digital Digital bp Monitor ပါသောကြိုးမဲ့ Spygmomanometer
ကလေးများပေါင်းစပ်ခြင်းအမျိုးအစား Aneroid လက်စွဲစာအုပ် Sphygmomanometer
CE ISO အတည်ပြုထားတဲ့အခမဲ့သွေးပေါင်ချိန်မီတာ
ဆေးရုံအလိုအလျောက် usb လက်မောင်းဒစ်ဂျစ်တယ်သွေးဖိအားမော်နီတာ
အရောင်းရဆုံးလက်မောင်း Blood Pressure Monitor / sphygmomanometer
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ CE FDA ကအတည်ပြုထားသော Sphygmomanometer ဆရာဝန်
လက်ကိုင် Bluetooth လက်အမျိုးအစားသွေးဖိအားမီတာ
အလိုအလျောက် BP အိမ်သုံးအသုံးပြုမှုစိတ်ကြိုက်သွေးဖိအားစောင့်ကြည့်
Online Ambulatory Blood Pressure BP Monitor ကိုဝယ်ပါ
CE FDA မှအတည်ပြုထားသော Digital BP Machine Blood + Pressure + Monitor
အီလက်ထရောနစ် Aneroid ရေစိုခံသွေးဖိအားစောင့်ကြည့်
Smart Wearable Bluetooth အထက်လက်မောင်းသွေးဖိအားစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း
ထုပ်ပိုး: Carton, U8OK မော်နီတာအတွက်တင်ပို့မှုစံနှုန်း
Supply နိုင်ခြင်း: 30000
CE က ISO အတည်ပြု Aneroid သွေးဖိအားမီတာ Arm Blood Pressure Monitor ကိုအိမ်သုံးသွေးပေါင်ချိန်စစ်ဆေးခြင်း၊ ဆေးရုံသွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာခြင်းစသည်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။...
Supply နိုင်ခြင်း: 300000 per month
Digital Cuff အလိုအလျှောက်သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာခြင်း မှတ်ဥာဏ်အစုပေါင်း ၉၀ sphygmomanometer၊ အုပ်စုလိုက်မှတ်ဥာဏ်၊ သိပ္ပံနည်းကျမှတ်တမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသွေးပေါင်ချိန်၊ မိသားစုတစ်ခုလုံးကိုစောင့်ရှောက်ရန်စက် နိုင်ငံခြားမှတင်သွင်းသောချစ်ပ်များပါ ၀ င်သော...
ထုပ်ပိုး: Carton, U80R မော်နီတာအတွက်ပုံမှန်ပို့ကုန်ထုပ်ပိုးခြင်း
Supply နိုင်ခြင်း: 300000/Mouth
BP ယန္တရားသွေးဖိအားမော်နီတာများအတွက် Air Valve BP Apparatus Blood Pressure Monitor အတွက် Air Valve ကိုအိမ်သုံးသွေးပေါင်ချိန်စစ်ဆေးခြင်း၊ ဆေးရုံသွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာခြင်းစသည်တို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ BSCI, CE, FDA...
အလိုအလျောက်ဆရာဝန် OEM LCD သွေးဖိအားစောင့်ကြည့် U80QH သည်လက်ကိုင်လူနာ၏သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာသည့်ကိရိယာဖြစ်ပြီး oscillography နိယာမနှင့်အညီဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီး ၂၄ နာရီလူနာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့် NIBP ဖြစ်သည်။...
ထုပ်ပိုး: Carton, U80H မော်နီတာအတွက်ပုံမှန်ပို့ကုန်ထုပ်ပိုးခြင်း
Ambulatory ဒစ်ဂျစ်တယ်အထက်လက်ရုံးသွေးဖိအား Monitor နံနက် bulatory ဒစ်ဂျစ်တယ်အထက်ပိုင်းလက်မောင်းသွေးဖိအား Monitor တစ်ခုစသည်တို့ကိုနေအိမ် Self-အသုံးပြုမှုကိုသွေးပေါင်ချိန်စမ်းသပ်မှု, ဆေးရုံသွေးဖိအားစောင့်ကြည့်မှု, များအတွက်အသုံးပြုရက c BSCI, CE, FDA...
FDA ကအတည်ပြုထားတဲ့ Bluetooth Heart Rate Blood Pressure Monitor Rm Blood Pressure Monitor ကိုအိမ်သုံးသွေးပေါင်ချိန်စစ်ဆေးခြင်း၊ ဆေးရုံသွေးပေါင်ချိန်စစ်ဆေးခြင်းစသည်တို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ BSCI, CE, FDA...
ရပ်တန့် Digital Digital bp Monitor ပါသောကြိုးမဲ့ Spygmomanometer Arm Blood Pressure Monitor ကိုအိမ်သုံးသွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း၊ ဆေးရုံမှသွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာခြင်းစသည်တို့ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ BSCI, CE, FDA...
အင်္ဂါရပ်များ ရှင်းလင်းသောစာဖတ်ခြင်းနှင့်အတူ 1. လိမ္မော်ရောင် backlight ကို ၂။ ခရီးဆောင်ဒီဇိုင်း 3.4* aaa ဘက်ထရီ 4. စူပါအကြီးစားနောက်ခံအလင်းပြ 5. WHO ကခွဲခြားညွှန်ကိန်း Memory ၏ 6.2* 90 အဖွဲ့များ ၇။ နှစ် / နေ့စွဲ / အချိန်ညွှန်ပြချက်...
ထုပ်ပိုး: Carton, U80 မော်နီတာအတွက်ပုံမှန်ပို့ကုန်ထုပ်ပိုး
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏အားသာချက် ၁။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များကို ၁၀ နှစ်ကျော်ထုတ်လုပ်သည် 2. အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်မား ၃။ သီးခြားဒီဇိုင်းနှင့်ထူးခြားသောအရောင်းအဖွဲ့ 4. အကြီးစားထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည် ၅...
ဆေးရုံအလိုအလျောက် usb လက်မောင်းဒစ်ဂျစ်တယ်သွေးဖိအားမော်နီတာ ဆေးရုံမှအလိုအလျောက် usb လက်ကိုင်ဒစ်ဂျစ်တယ်သွေးပေါင်ချိန်ကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ အိမ်သုံးသွေးပေါင်ချိန်စစ်ဆေးခြင်း၊ ဆေးရုံသွေးပေါင်ချိန်စစ်ဆေးခြင်းစသည်တို့ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ BSCI, CE, FDA...
လက်ကားမြင့်အရည်အသွေးမြင့်လက်လက်သွေးဖိအားစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသူများ လက်လီအရည်အသွေးမြင့်လက်မောင်းသွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာခြင်းကိုအိမ်သုံးသွေးပေါင်ချိန်စစ်ဆေးမှု၊ ဆေးရုံသွေးပေါင်ချိန်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းစသည်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။...
ဒီဂျစ်တယ်အလိုအလျောက်သွေးဖိအားအထက်လက်မောင်း ဒီဂျစ်တယ်အလိုအလျောက်သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာသည့်အမြင့်လက်ရုံးကိုအိမ်သုံးသွေးပေါင်ချိန်စစ်ဆေးခြင်း၊ ဆေးရုံသွေးပေါင်ချိန်စစ်ဆေးခြင်းစသည်တို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ BSCI, CE, FDA...
အင်္ဂါရပ်များ ရှင်းလင်းသောစာဖတ်ခြင်းနှင့်အတူ 1. လိမ္မော်ရောင် backlight ကို ၂။ အိတ်ဆောင်ဒီဇိုင်း 3.4* aaa ဘက်ထရီ 4. စူပါအကြီးစားနောက်ခံအလင်းပြ 5. WHO ကခွဲခြားညွှန်ကိန်း Memory ၏ 6.2* 90 အဖွဲ့များ ၇။ နှစ် / နေ့စွဲ / အချိန်ညွှန်ပြချက် ၈။...
ထုပ်ပိုး: Carton၊ U8OR မော်နီတာအတွက်တင်ပို့မှုစံနှုန်း
လက်ကိုင် Bluetooth လက်အမျိုးအစားသွေးဖိအားမီတာ လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်၊ တိကျသည်၊ လျင်မြန်။ ရှင်းလင်းသည်။ သင်၏သွေးပေါင်ချိန်နှင့်သွေးခုန်နှုန်းကိုဖော်ပြသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ISO13485 နှင့် QSR820...
အလိုအလျောက် BP အိမ်သုံးအသုံးပြုမှုစိတ်ကြိုက်သွေးဖိအားစောင့်ကြည့် Shenzhen Urion Technology Co. , Ltd. ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးလှပသောကမ်းရိုးတန်းမြို့ဖြစ်သောရှန်ကျန်းတွင်တည်ရှိသည်။...
Online Ambulatory Blood Pressure BP Monitor ကိုဝယ်ပါ Ambulatory Blood Pressure Monitor, အိမ်သုံးသွေးပေါင်ချိန်စစ်ဆေးခြင်း၊ ဆေးရုံသွေးပေါင်ချိန်စစ်ဆေးခြင်းစသည်တို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ BSCI, CE, FDA...
ထုပ်ပိုး: Carton, U80K မော်နီတာအတွက်ပုံမှန်ပို့ကုန်ထုပ်ပိုးခြင်း
CE FDA မှအတည်ပြုထားသော Digital BP Machine Blood + Pressure + Monitor CE FDA သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာခြင်းကိုအိမ်သုံးသွေးပေါင်ချိန်စစ်ဆေးခြင်း၊ ဆေးရုံမှသွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာခြင်းစသည်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။...
အီလက်ထရောနစ် Aneroid ရေစိုခံသွေးဖိအားစောင့်ကြည့် အရည်အသွေးမြင့်အရောင် TFT display၊ ဒေတာစာရင်း၊ ဒေတာစာရင်း၊ လမ်းကြောင်းဂရပ်၊ ဖောင့်ကြီးများအနေဖြင့် NIBP ဒေတာသည်ရှင်းလင်းသည် ကိရိယာသည်ပါဝါနိမ့်အချက်ပြအချက်အလက်များ၊ အချက်ပြအချက်အလက်များ၊...
Smart Wearable Bluetooth အထက်လက်မောင်းသွေးဖိအားစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း HD ဒီဂျစ်တယ်ဖန်သားပြင်။ လွယ်ကူသောလည်ပတ်မှုအတွက် Wearable လက်မောင်း အသိဉာဏ်ဖိအား။ အသင်းဝင်များ * မှတ်ဉာဏ် ၉၀ စုံ လှပသော High-သိပ်သည်းဆ polyethylene shell ကို။...
တရုတ်နိုင်ငံ အထက်လက်ရုံးသွေးပေါင်ချိန် Monitor ပေးသွင်း
ဒီနေရာတွင် အထက်လက်ရုံးသွေးပေါင်ချိန် Monitor အတွက်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ငါတို့ အပေါ်လက်လက်ဒစ်ဂျစ်တယ်သွေးဖိအားစောင့်ကြည့်,အကောင်းဆုံးလက်မောင်းသွေးဖိအားစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း,ကြီးမားသောလက်နက်များအတွက်သွေးဖိအားစောင့်ကြည့်,ကြိုးမဲ့အထက်လက်ရုံးသွေးဖိအား Monitor,, ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပို့ကုန်ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီပို့ကုန်အရည်အချင်းပြည့်ထုတ်ကုန်သေချာစေရန် အထက်လက်ရုံးသွေးပေါင်ချိန် Monitor ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်များတိုးတက်ပါပြီ။
သငျသညျ အထက်လက်ရုံးသွေးပေါင်ချိန် Monitor အတွက်ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုလျှင်, parameters တွေကို, မော်ဒယ်များ, ပုံများ, စျေးနှုန်းများနှင့် အပေါ်လက်လက်ဒစ်ဂျစ်တယ်သွေးဖိအားစောင့်ကြည့်,အကောင်းဆုံးလက်မောင်းသွေးဖိအားစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း,ကြီးမားသောလက်နက်များအတွက်သွေးဖိအားစောင့်ကြည့်,ကြိုးမဲ့အထက်လက်ရုံးသွေးဖိအား Monitor,, အကြောင်းကိုအခြားသတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုဖို့ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို click ပါ။
သငျသညျအုပ်စုတစ်စုသို့မဟုတ်လူတစ်ဦးချင်းစီများမှာမည်သို့ပင်ကျနော်တို့ အထက်လက်ရုံးသွေးပေါင်ချိန် Monitor အကြောင်းကိုတိကျမှုနှင့်ပြည့်စုံသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူသငျသညျပေးအတတျနိုငျဆုံးမည်!
ဒစ်ဂျစ်တယ် LCD မျက်နှာပြင်နှင့်အတူလက်ကားစျေးနှုန်းအလိုအလျောက်စကင်နာနံရံတွင်တပ်ဆင်ထားဒီဂျစ်တယ်သာမိုမီတာ
ဒီဂျစ်တယ် LCD Display မဟုတ်သောအဆက်အသွယ် Infrared Thermometer
Computer နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Automatic Blood Pressure Monitor
CE FDA မှအတည်ပြုသောလက်ကောက်ဝတ်သွေးပေါင်ချိန်ကိုတိုင်းတာသည်
အကောင်းဆုံး BP Monitor ဒီဂျစ်တယ်သွေးပေါင်ချိန် Monitor
ဒစ်ဂျစ်တယ်အမြဲတမ်းသွေးပေါင်ချိန် Monitor လက်မောင်းအမျိုးအစား
လူနာတင်ယာဉ်အိတ်ဆောင် Aneroid သွေးဖိအားစောင့်ကြည့်
ဒီဂျစ်တယ်အနီအောက်ရောင်ခြည် LCD နဖူးကလေးအီလက်ထရောနစ်အပူတိုင်းမီတာ
လိပ်စာ Company address: Building D, Jiale Electronics,No.3, Chuangwei Road, Matian Street, Guangming District,Shenzhen,China(Mainland), Shenzhen, Guangdong